Global Voices teny Malagasy » Bahrain: Nosamborina ilay Bilaogera Malaza Mahmood Al-Yousif · Global Voices teny Malagasy » Print
Bahrain: Nosamborina ilay Bilaogera Malaza Mahmood Al-Yousif
Voadika ny 30 Marsa 2011 10:30 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Bahrain, Mediam-bahoaka
Taorian'ny tamin'ny 3 ora maraina, ora any an-toerana, dia nosamborina tao an-tranony ilay bilaogera malaza Mahmood al-Yousif . Ni- tweet  izy alohan'ny nialany tao an-trano miaraka amin'ireo polisy:
Ato amiko ny polisy
Mahmood Al-Yousif, nikabary tamin'ny fotoan-dehibe tao an-toerana
Bilaogera manana ny lanjany  i Al-Yousif ary ny hafatra farany nosoratany dia ny fanohanany ny fitambaran'ny Bahrainis . Tamin'ny 15 Martsa, nanoratra  izy hoe:
Nifidy ny hiverina [aty Bahrain] aho mba hanohana ny soa iombonana sy ny fifandeferana. Ary hiezaka hampiseho hatrany amin'ny olona fa tsy miankina amin'ny finoan'izy ireo, ny sata na ny haren'izy ireo, raha tsy nahitam-bahaolana ny hampikambana antsika Bahrainis ka anjarantsika ny mitady vahaolana tsara mba hiaraha-monina miaraka sy hanatsara ny fahasamihafantsika.
Tsy te-hanondro olona aho na koa faly hanome fampitandremana. Momba ny hankatoavana ny antony manokana izao ady izao aho, mba hanohizantsika ny lalana, tsy mampaninona na dia ho mafy aza izany.
Al-Yousif no misahana ny fintantanan'ny tranokala antsoina hoe JustBahraini , fanentanana iraisana ho enti-manohitra ny fanavakavahana ara-pinoana. Nilaza koa izy vao haingana  fa nahazo fandrahonana avy amin'ny polisy ny iray amin'ireo mpanohana ny fanentanana.
Namafisin'ny rahalahiny  ny fisamborana azy, ary koa ny zanany lahy, izay ni-tweet :
Tonga tao an-tranonay ny polisy ary nisambotra ny raiko Mahmood Al-Yousif. @BahrainRights @OnlineBahrain
Sary  avy amin'ny Rotary Club ny Adliya , afaka jerena ao amin'ny Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0) license .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/30/15807/
 Mahmood al-Yousif: http://mahmood.tv/
 Bilaogera manana ny lanjany: http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmood_Al-Yousif
 Nilaza koa izy vao haingana: http://mahmood.tv/2011/03/19/just-bahraini-not-welcome-at-checkpoints/#more-7347
 Rotary Club ny Adliya: http://www.flickr.com/photos/rotaryclubofadliya/
 Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0) license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en